သံစဉ်မဲ့ အလင်္ကာများ: ယောင်္ကျားမာယာ
စာရေးသူ--> အိမ့်ချမ်းမြေ့ (စာတင်ချိန်) 12:06 AM
း) တစ်ခုခုတော့ မှတ်ချက်ရေးချင်တယ် ဒါမယ့် ဘာရေးရမှန်းမသိဘူး ဟဲဟဲ ကြောက်လို့ ။ ဟုတ်တော့ဟုတ်တယ် မိန်းမ မာယာ သဲကိုးဖြာက ကျနော်တို့အတွက်တော့ အီးဇီးပါလို့ ယောက်ျားထုကြီးတစ်ရပ်လုံးအတွက် ကြွေးကြော်လိုက်တယ် ။ ဒီကဗျာကိုဖတ်ရတာ စိတ်ထဲတော့ထင့်နေတယ် ဘာဖြစ်လို့လဲ ???
အင်း မော်မန့်တောင် ဘယ်လိုပေးရမသိဖြစ်သွားတယ်။
ပြောတာ ဟုတ်မှာပါလေ။ :)
မောင်မျိုး.. မကြောက်နဲ့...း)) လွတ်လပ်စွာခံစားချက်အပြည့်နဲ့ ကော့မန့်ပေးနိုင်ပါသည်။ အစ်မလည်း စိတ်တထင့်ထင့်နဲ့ပဲရေတာ.. ဒီကဗျာကိုလေ။
Republic... :) very wise!
စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမှာ မာယာဆိုတဲ့ အရာတော့ပါမယ်မထင်ဘူးနော်ဗျ......။
မာယာထားတတ်တဲ့ ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်စွာနဲ့ စွဲလမ်းနေမိတဲ့ မိန်းမ၊ ယောက်ျားမရွေး..... သိပ်သနားစရာကောင်းတယ်လို့ မြင်မိတာ.....။
လှပတဲ့ ၀ဋ်တစ်မျိုးလို့ ဆိုရလေမလား........???
“စစ်မှန်တဲ့ ချစ်ခြင်းမှာ မာယာဆိုတဲ့ အရာတော့ပါမယ် မထင်ဘူးနော်ဗျ......။
မာယာထားတတ်တဲ့ ချစ်သူကို ပိုင်ဆိုင်စွာနဲ့ စွဲလမ်းနေ မိတဲ့ မိန်းမ၊ ယောက်ျားမရွေး..... သိပ်သနားစရာကောင်းတယ်လို့ မြင်မိတာ.....။
လှပတဲ့ ၀ဋ်တစ်မျိုးလို့ ဆိုရလေမလား”
ကိုဏီလင်းညိုနဲ့ တသဘောတည်း ရှိတယ်။ ကိုယ့်ချစ်သူကို တုန်နေအောင် ချစ်တဲ့ ယောက်ျား တယောက်ဟာ ( မာယာဆိုတာ ဝေးလို့ ) သူမကို အသေးအမွှား ကိစ္စကလေးတွေ မှာတောင် လိမ်ရက်မှာ၊ လိမ်ချင်မှာ မဟုတ်တော့ဘူးလို့ ထင်တယ်။ တကယ်တော့ လူတယောက်မှာ ချစ်သူတယောက် လိုအပ်တာကိုက မိမိ အစွမ်းကုန်၊ အဆုံးစွန် ရိုးသားလို့ ရမဲ့ နေရာလေးတခုကို လိုချင်လို့ပဲ မဟုတ်ပါလား။